Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Uhlaziyo olutsha kuGonyo lwe-COVID-19 kunye neZincedisi
Siyazi ukuba ugonyo, ludityaniswe neminye imilinganiselo yempilo yoluntu kunye neyomntu ngamnye, lusebenza ukunciphisa ukusasazeka kwe-COVID-19 kunye neentlobo zayo. Nangona kunjalo, ukuvela kwamva nje kokwahluka kwe-Omicron sisikhumbuzo sokuba ubhubhani we-COVID-19 awukapheli kwaye siphila kuluntu lwehlabathi. NjengamaGosa aPhezulu oNyango lwezeMpilo, siyaqaphela ukubaluleka kokulingana kwehlabathi jikelele ekusasazeni isitofu sokugonya kunye nendima edlalwa ukungalingani ekuveleni kwezinto ezintsha. Ngelixa sifunda ngakumbi ngalo mahluko, sinokunceda ukugcina inkqubela yethu ehlangeneyo ngokuqhubeka neenkqubo zogonyo lwe-COVID-19 kunye nokulandela amacebo angundoqo ezempilo oluntu athe asebenza ngempumelelo ekulawuleni lo bhubhani.
NjengamaGosa aPhezulu oNyango lwezeMpilo, siyaqaphela ukubaluleka kokulingana kwehlabathi jikelele ekusasazeni isitofu sokugonya kunye nendima edlalwa ukungalingani ekuveleni kwezinto ezintsha. Ngelixa sifunda ngakumbi ngalo mahluko, sinokunceda ukugcina inkqubela yethu ehlangeneyo ngokuqhubeka neenkqubo zogonyo lwe-COVID-19 kunye nokulandela amacebo angundoqo ezempilo oluntu athe asebenza ngempumelelo ekulawuleni lo bhubhani.
Ubungqina besayensi, idatha eguqukayo kunye neengcebiso zengcali ziyaqhubeka nokusazisa kolona setyenziso lusebenzayo lwe-COVID-19 yezitofu ezivunyiweyo eCanada. I-NACI isandula ukukhupha izindululo ezihlaziyiweyo kwizitofu zokugonya ze-COVID-19 ezisekwe kubhubhane wesifo kunye nobungqina bokuncipha kokhuseleko ngokuhamba kwexesha. Uthotho olupheleleyo olupheleleyo olunesitofu sokugonya se-mRNA COVID-19 siyaqhubeka sisincomo sokuqala, kwaye kufuneka sinikezelwe kuye wonke umntu okwiqela eligunyazisiweyo ngaphandle kokuchasana nesitofu sokugonya. I-NACI ngoku yenza izindululo malunga needosi ze-booster kule minyaka ili-18 ubudala nangaphezulu ukuba ubuncinane iinyanga ezi-6 zidlulile kuthotho lwazo oluphambili.
Ngokukodwa, i-NACI icebisa ukuba iidosi ezomelezayo yesitofu sokugonya se-mRNA COVID-19 kufuneka zinikezelwe kwaba bantu balandelayo: abantu abadala abaneminyaka engama-50 ubudala nangaphezulu; abantu abadala abahlala kumakhaya ahlala ixesha elide kubantu abadala okanye ezinye iindawo zokuhlala ezihlanganisayo ezibonelela ngokunyamekela abantu abadala; abantu abadala kwiZizwe zokuQala, i-Inuit okanye iMétis; abafumana uthotho lwesitofu sokugonya kwintsholongwane yentsholongwane egqitywe ngezitofu zokugonya kuphela zentsholongwane yentsholongwane; kunye nabasebenzi bezempilo abaphambili ngaphambili (abanonxibelelwano olusondeleyo ngqo kunye nezigulana) kwaye banokunikwa abantu abadala abaneminyaka eli-18 ukuya kuma-49 ubudala.
Ukuzalisa ishedyuli yokugonywa kweedosi ezimbini kubo bonke abafanelekileyo kuhlala kubalulekile. Uluhlu oluphambili lunika ukhuseleko oluhle kakhulu esibhedlele kunye nokufa kwixesha elide, ngakumbi xa idosi yesibini inikezelwa ubuncinane kwiiveki ezisi-8 emva kwedosi yokuqala. I-booster ibuyisela ukhuseleko olunokuthi lwehlile ngokuhamba kwexesha, luvumela ukhuseleko oluhlala ixesha elide ukunceda ukunciphisa usulelo, usulelo, kwaye kwezinye iindawo, izifo ezinzima. I-NACI ikwavavanye idatha yabantu ababenosulelo lwangaphambili kwaye iyaqhubeka nokucebisa ukuba bafumane ishedyuli efanayo kwabo bangazange bosuleleke ngaphambili. Ugonyo nasemva kosulelo lubonelela ngokhuseleko oluthembekileyo noluhlala ixesha elide kwi-SARS-CoV 2.
Njengoko kuphawuliwe kwingxelo yethu yangaphambili malunga ne-COVID-19 eyomelezayo, amaphondo kunye nemimandla iya kuqhubeka isakhela phezu kweengcebiso ze-NACI zokuphumeza ngobuchule amaphulo okugonya asebenzayo kwiindawo zabo. Sizimisele ukusebenzisa olona gonyo lwe-COVID-19 ngokusekwe kubungqina bamva nje kunye neengcebiso zengcali ukufikelela kwiinjongo zethu ezihlangeneyo zokunciphisa ukugula okumandundu kunye nokufa xa sisonke ngelixa sigcina umthamo wenkqubo yezempilo, kunye nokunciphisa usulelo ukukhusela abantu abasemngciphekweni omkhulu. Kwingcebiso yokubonelela ngezinto ezikhuthazayo kubantu abadala abahlala eCanada, sithatha indlela yokhuseleko kwaye siqinisekisa ukuba siyabakhusela abantu abasemngciphekweni kunye nenkqubo yethu yezempilo.
I-NACI ikwakhuphe isikhokelo esihlaziyiweyo malunga nokusetyenziswa kwesitofu sokugonya se-mRNA esekwe kweyona datha yamva nje yokucupha evela eCanada, e-US naseYurophu, malunga neemeko ezinqabileyo ze-myocarditis kunye ne-pericarditis emva kogonyo. Ukunciphisa umngcipheko we-myocarditis okanye i-pericarditis, efunyenwe iphezulu kwiModerna kunePfizer kulutsha kunye nabantu abadala abancinci, i-NACI icebisa ukuba imveliso yePfizer-BioNTech 30 mcg ikhethwa kuthotho oluphambili kule minyaka ili-12 ukuya kuma-29 ubudala. Ikhefu leeveki ezi-8 phakathi kwedosi yokuqala neyesibini iyacetyiswa, njengoko ixesha elide elifana neli linokuthi libe nomngcipheko omncinci we-myocarditis kunexesha elifutshane kwaye kunokwenzeka ukuba kubangele ukhuseleko oluphuculweyo. I-NACI ikwabonise ukuba imveliso ye-Pfizer-BioNTech 30 mcg inokukhethwa kwi-booster dose kuleyo 18 ukuya kwi-29 yeminyaka ubudala. Abantu abafikisayo kunye nabaselula abaneminyaka eli-12 ukuya kwengama-29 ubudala abasele befumene idosi enye okanye ezimbini zesitofu sokugonya iModerna ngaphezulu kweeveki ezimbalwa ezidlulileyo akufuneki bakhathazeke, njengoko umngcipheko we-myocarditis/pericarditis ngesi sitofu unqabile kwaye uyingozi. Isiganeko sikholisa ukubakho kwiveki elandela ugonyo. Ugonyo akufanele lurhoxiswe ukuba imveliso ekhethwayo ayifumaneki ngexesha lokugonywa.
Iimeko ze-myocarditis kunye/okanye i-pericarditis emva kogonyo lwe-mRNA COVID-19 zixelwe malunga ne-1 kuma-50,000 okanye i-0.002% yeedosi ezisetyenziswayo. Ukufunyanwa kweziganeko ezinqabileyo ezifana nesi kubonisa ukuba iinkqubo zethu zokucupha eCanada nakwihlabathi jikelele ziyasebenza. Izehlo ezingalunganga (iziphumo ebezingalindelekanga) ezilandela ugonyo lwe-COVID-19 ziyenzeka, kwaye uninzi lunobulali kwaye lubandakanya ukuba buhlungu kwindawo yokutofwa okanye umkhuhlane omncinci. Ngaphezulu kwezigidi ezingama-60 zeedosi zesitofu sokugonya se-COVID-19 ziye zalawulwa ukuza kuthi ga ngoku eCanada, kunye neziphumo ezibi ezisele zinqabile (0.011% yazo zonke iidosi ezilawulwayo). Amaphononongo oqwalaselo, kuquka lawo avela eKhanada, ayaqhubeka nokubonisa ukuba zombini izitofu ezivunyiweyo ze-mRNA zikhokelela ekusebenzeni kogonyo oluphezulu, ngakumbi ngokuchasene nesifo esiqatha. Ezinye izifundo, kubandakanya nezo zaseCanada, zicebisa ukuba isitofu sokugonya seModerna senze impendulo ethile ephezulu yomzimba yokuzikhusela ekhokelela ekusebenzeni okuphezulu okunokuhlala ixesha elide xa kuthelekiswa nogonyo lwePfizer-BioNTech COVID-19.
IiGosa eziPhezulu zezeMpilo zaseCanada zamkela uhlalutyo lwe-NACI kwaye ziyababulela ngokubonelela ngeengcebiso zabo ezihlaziyiweyo. Kwingxelo yethu yangaphambili malunga nomngcipheko we-myocarditis kunye ne-pericarditis emva kogonyo lwe-COVID-19, amaGosa aPhezulu ezeMpilo ezeMpilo abonise ukubaluleka kokwenza ukhuseleko lube yinto ephambili kuyilo olunenkathalo lweengcebiso kunye neenkqubo zogonyo kwaye siya kuqhubeka sikwenza oko kwaye. ukunxibelelana ngeziphumo kuluntu lwaseCanada. Siza kuqhubeka nokusebenzisa ubungqina ukunceda ukuyila amacebo anokunciphisa imingcipheko ngakumbi ekuhambeni kwexesha.
Siyaqonda ukuba abantu baseCanada banokuba nemibuzo malunga nezindululo ezihlaziyiweyo zokusetyenziswa kwe-COVID-19 booster kunye nogonyo lwe-mRNA, ngokuxhomekeke kwiqela labo leminyaka, imeko yokugonywa kunye neemeko ezizodwa. Abantu kufuneka baqhubeke nokuqwalasela izibonelelo ezicacileyo zazo zonke izitofu zokugonya ezivunyiweyo ukuba zisetyenziswe eCanada ekuthinteleni ukugula kakhulu, ukulaliswa esibhedlele kunye nokufa kwi-COVID-19. Abantu kufuneka bafune ulwazi kumboneleli wabo wezempilo okanye kwabasemagunyeni ekuhlaleni ukuba banemibuzo malunga neemveliso zesitofu sokugonya ezibalungeleyo.
Izibonelelo zezitofu zokugonya ezigunyazisiweyo eCanada ziyaqhubeka ukodlula umngcipheko. Ukosulelwa yintsholongwane ebangela i-COVID-19 inxulunyaniswe kwiingxaki ezininzi ezahlukeneyo ezinokukhokelela esibhedlele kunye/okanye nokufa. I-Myocarditis yenye yeengxaki ezaziwayo zosulelo lwe-COVID-19, kunye nomngcipheko ophezulu kakhulu emva kosulelo kunasemva kogonyo. Ugonyo lunceda ukunqanda zonke ezi ngxaki kwaye, ludityaniswe namanye amanyathelo ezempilo yoluntu njengokunxiba imaski, ukuphepha iindawo ezixineneyo, ukunyusa umoya kunye nokuhamba ngokwasemzimbeni, kunokusinceda ukuba sonwabele ezona zinto sizithanda kakhulu. AmaGosa aPhezulu ezeMpilo eCanada ayaqhubeka nokukhuthaza bonke abantu ukuba bafumane ugonyo ukuze bazikhusele kunye nabo babangqongileyo.
IBhunga leeNtloko zezoNyango zezeMpilo libandakanya iGosa eliPhezulu lezeMpilo lezeMpilo kwiphondo ngalinye kunye nommandla wolawulo, iGosa eliPhezulu lezeMpilo yaseCanada, uMcebisi oyiNtloko wezoNyango wezeMpilo eCanada, iGosa eliyiNtloko lezoNyango kwiMpilo yoLuntu yeNkonzo zeMveli eCanada, uMphathi oyiNtloko. IGosa lezoNyango elivela kwiGunya lezeMpilo leZizwe zokuQala, kunye namalungu akwizikhundla ezisuka kwamanye amasebe karhulumente.